Rheumatism: Rheumatic diagnoses [Ndụmọdụ, Mmega ahụ, Nri, Ọgwụgwọ]]
Rheumatism bụ okwu nche anwụ nke gụnyere ọnọdụ ndị na-akpata mgbu na-adịghị ala ala na nkwonkwo akwara.
Enwere ụdị rheumatism karịrị narị abụọ.
Dịka e kwuru, nkwonkwo, njikọ na akwara njikọta akwara na-emetụtakarị rheumatism, mana ọ dị mkpa ịmara na nchoputa na-arịa ọrịa ogbu na nkwonkwo nwekwara ike imetụta akpụkpọ ahụ, ngụgụ, akpụkpọ anụ mucous na akụkụ ndị ọzọ. - ọ dabere na ụdị nchoputa rheumatic ọ bụ. Nwere onwe gị ịkpọtụrụ anyị na ibe Facebook anyị ma ọ bụrụ na i nwere ndenye ma ọ bụ kwuru.
Emetụta? Soro ndị otu Facebook «Rheumatism - Norway: Nnyocha na akụkọ»Maka mmelite ohuru banyere nyocha na ide banyere usoro mgbasa ozi banyere nsogbu a. N'ebe a, ndị otu nwekwara ike ịnweta enyemaka na nkwado - n'oge niile ụbọchị - site na mgbanwe maka ahụmịhe na ndụmọdụ ha.
ego: Na ala nke edemede ị ga-ahụ vidiyo ọzụzụ na mmega emebere maka ndị nwere ọrịa anụ ahụ dị nro.
Ofdị rheumatism dị iche iche?
Na mbụ, tupu nyocha na ihe omuma anyị emeela ka anyị mata nke ọma ihe rheumatism gụnyere, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gbasara ịba ụba ma 'weta ya n'okpuru mbo' - mana ugbua ịmara na ọ dị mkpa ịchọpụta ụdị rheumatism ọ bụ, ka ị nwee ike nweta ọgwụgwọ na enyemaka kacha mma.
Anyị na-amata ọdịiche dị n'etiti ọrịa kansa na-abụghị autoimmune na autoimmune rheumatic. Eziokwu ahụ bụ na nchoputa nke rheumatic bụ autoimmune pụtara na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-awakpo mkpụrụ ndụ nke ya. Ihe atụ nke a bụ Ọrịa Seagrass, bụ ebe mkpụrụ ndụ ọbara ọcha na-awakpo glands lacrimal na glands salivary, nke na-eduga na anya akọrọ na ọnụ.
Ọrịa Ọrịa Autoimmune?
Dịka ekwuru, nsogbu rheumatic nwekwara ike ịbụ autoimmune. Offọdụ n'ime ụdị ọrịa rheumatic ọrịa ụkwara akparamagwa bụ systemic lupus erythematosus, rheumatoid ogbu na nkwonkwo (ogbu na nkwonkwo), ọrịa ogbu na nkwonkwo, Sjögren syndrome, scleroderma, polymyositis, dermatomyositis, ọrịa Behcets, ọrịa Reiter na ọrịa ogbu na nkwonkwo.
7zọ XNUMX kachasị mara nke rheumatism
Ọ bụ eziokwu na ụdị ụfọdụ nke ọrịa rheumatic bụ ndị a kacha mara nke ọma na ndị zuru ebe niile na Nọọwee - ma n'ogo nke ihe ọmụma n'ozuzu, kamakwa ruo n'ókè ndị mmadụ metụtara. Ikekwe nchọpụta ndị a kacha mara amara bụ ọrịa ogbu na nkwonkwo (ogbu na nkwonkwo), spondylitis na-egbu egbu (nke a na-akpọbu Bechterews), fibromyalgia (Bløtvevsrevmatisme) arthrosis (Osteoarthritis), gout, lupus og Ọrịa Seagrass.
- Lee, anyị na-ahụ ihe atụ nke arthrosis na ikpere. Osteoarthritis na - emetụta nkwonkwo na - ebu ibu.
Mgbaàmà General nke rheumatism
Mgbu ma ọ bụ ihe mgbu - a na-ahụkarị na ma ọ bụ dị nso na nkwonkwo ma ọ bụ karịa
Mgbu mgbe ị na-ebugharị mpaghara emetụtara
Ahụhụ nrụgide site na mmetụ ma ọ bụ palpation
Ike na mbenata agagharị - ọkachasị mgbe ịnọ ọdụ otu ebe
Mgbapụta mgbaàmà site na mmega ahụ ọkụ / ọrụ, mana mmega ahụ siri ike
Ihe ojoo banyere mgbanwe ihu igwe. Karịsịa mgbe iwetulata ikuku ikuku mmiri (megide nrụgide dị ala) yana iru mmiri dị elu
Enyemaka mgbe kpo oku mpaghara emetụtara. Dịka. site na mmiri ịsa ahụ na-ekpo ọkụ.
Anyị na-arịba ama na ọ bụghị nsogbu niile rheumatic nwere mgbaama ndị a, yana ọtụtụ ọrịa rheumatic nwekwara ọrịa nke ha, akọwapụtara nke ọma. Otú ọ dị, ọ bụ ndị mmadụ na-arịa ọrịa ogbu na nkwonkwo na-ekwukarị ma ọ dịkarịa ala anọ n'ime mgbaàmà asaa ahụ a kpọtụrụ aha n'elu. Ahụhụ a kọwara nke rheumatism bụ 'miri emi, mgbu na-egbu mgbu'.
Oria ndi ozo puru ime gụnyere:
anaemia (Onu ọbara ala)
ije isi ike (Ije ije na ijeghari mmadu nwere ike isi ike ma obu ihe ojoo)
afọ ọsịsa (Ọtụtụ mgbe metụtara mbufụt nke eriri afọ)
Ogbenye ike (Ọtụtụ mgbe, nsonaazụ nke abụọ n'ihi enweghị mmegharị / mmega ahụ)
Ihi ụra na-adịghị mma (Sleepdalata n'ụra n’ụra na ịmụrụ anya bụ ihe mgbaàmà a na-ahụkarị)
Oria ezé na adighi ike chịngọm nsogbu
Mgbanwe ọbara mgbali elu
fever (Ọrịa na mbufụt nwere ike bute ahụ ọkụ)
CRP dị elu (Ngosiputa oria ma obu oria)
Metabolism dị ala (dịka ngbakwunye na thyroiditis Hashimoto)
afo Nsogbu (Usoro mmebi nwere ike itinye aka na nsogbu afọ na mgbu afọ)
Naa ike mgbanwe (Obere agagharị na nkwonkwo na akwara)
oge cramps (Oria nwere ike ibute ọrịa ogbu na nkwonkwo)
akọrọ n'Ọnụ Ọtụtụ mgbe Ọrịa Seagrass)
ụtụtụ isi (Ọtụtụ ụdị ọrịa ogbu na nkwonkwo nwere ike ibute isi ụtụtụ)
muscle adịghị ike (Ọrịa ogbu na nkwonkwo / ọrịa ogbu na nkwonkwo nwere ike ịkpata mfu anụ ahụ, mmebi akwara na ike belata)
Olu olu na olu siri ike
ibu ibu (Ọtụtụ mgbe, ihe nke abụọ mere n'ihi enweghị ike ịkwaga)
dizziness (Dizzness nwere ike ime na ụdị dị iche iche nke ọrịa ogbu na nkwonkwo na ọnọdụ nkwonkwo, nke nwere ike ịbụ nke abụọ na akwara ndị na-emechi emechi na nkwonkwo siri ike)
ike ịgwụ (N’ihi usoro na-aga n’ihu n’arụ, ndị nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo nwere ike ịna-enwe ike ọgwụgwụ na ike ọgwụgwụ).
ibu Loss (Udiri oke ibu nwere ike ibute ya na ogbu na nkwonkwo)
Isi na ahụ ike (Mmetụta dị nro nke emetụtaghị ihe mgbu nwere ike ịpụta na ọrịa ogbu na nkwonkwo / ọrịa ogbu na nkwonkwo)
Ka ejikọtara ọnụ ma ọ bụ nọrọ naanị ya, mgbaama ndị a nwere ike ibute ezigbo ogo ndụ na ịrụ ọrụ.
Ọgwụgwọ rheumatism na ogbu na nkwonkwo
Enweghị ọgwụgwọ ọ bụla maka ọrịa rheumatism na ọrịa ogbu na nkwonkwo, ma enwere mgbaàmà mgbaàmà na usoro nke enweghị nhịahụ. - dị ka ọgwụgwọ anụ ahụ, ọgwụgwọ anụ ahụ, ọgwụgwọ chiropractic omenala, mgbanwe ndụ, ndụmọdụ nri, ọgwụgwọ ahụike, nkwado (dịka mgbatị mkpịsị ụkwụ) na ịwa ahụ / ịwa ahụ.
Atụmatụ: Mgbanwe dị mfe na kwa ụbọchị maka ọtụtụ bụ iji pụrụ iche na-emegharị mkpakọ uwe og mkpakọ sọks (njikọ ndị ahụ mepere na windo ọhụrụ) - ndị a nwere ike n'ezie inye aka na mgbasawanye ọbara na mkpịsị aka siri ike na aka na-egbu mgbu, ma si otú a nyere aka ịnọgide na-arụ ọrụ na ndụ kwa ụbọchị.
Ndepụta nke usoro ọgwụgwọ dị iche iche a na-ejikarị maka rheumatism
- Ọgwụ eletriki / Ọgwụ Ọgwụ (TENS)
- Nhazi elektrọnik
- Ọgwụ anụ ahụ na mmega ahụ
- ọgwụgwọ laser dị ala
- Ndụ mgbanwe
- Njikọ nkwonkwo chiropractic na chiropractic
- ndụmọdụ nri
- Ngwọta oyi
- Ngwọta ọgwụ
- Nkwado nke nkwonkwo (dika uzo uzo ma obu uzo ozo Nkwado nke nkwonkwo)
- Ọrịa ezumike ma zuo ikee
- Okpomoku di aru
Ọgwụ eletriki / Usoro Ọgwụ (TENS)
Nnyocha nyocha nke usoro buru ibu (Cochrane, 2000) kwubiri na usoro ọgwụgwọ ike (TENS) dị irè na njikwa mgbu nke ọrịa ogbu na nkwonkwo karịa placebo.
Usoro ọgwụgwọ nke ọrịa ogbu na nkwonkwo / ọrịa ogbu na nkwonkwo
Ọgwụ elektrik emeela ka ọ pụta ihe dị mma megide ihe mgbu ogbu na nkwonkwo (Ganesan et al, 2009).
Ọgwụ ọgwụgwọ anụ ahụ na ọgwụgwọ anụ ahụ na ọgwụgwọ ọrịa ogbu na nkwonkwo / ọrịa ogbu na nkwonkwo
Ọgwụ anụ ahụ nwere ike ịrụ ọrụ dị mma na nkwonkwo metụtara ya, ọ nwekwara ike iduga n'ịba ụba ọrụ yana yana mma ndụ. A na-atụ aro mmega ahụ kwesịrị ekwesị na mmega ahụ ka ọ nwee ahụike nkwonkwo na ahụike mmadụ niile.
Ọgwụ laser dị ala
Nnyocha egosila na laser dị ala (nke a na-akpọkwa laser anti-inflammatory laser) nwere ike ịrụ ọrụ n'ibelata ihe mgbu na imeziwanye ọrụ na ọgwụgwọ ọrịa ogbu na nkwonkwo na osteoarthritis. Ọdịdị nyocha dị mma.
Mgbanwe obibi ndụ na ogbu na nkwonkwo
N’inyere aka mmadụ ka o buru ibu, imega ahụ nke ọma ma ọ dịkarịa ala iri nri kwesịrị ịdị ezigbo mkpa maka ogo onye ọrịa ogbu na nkwonkwo metụtara.
Dịka ọmụmaatụ, ịba ụba ibu na oke ibu nwere ike ibute ọbụna nrụgide ka ukwuu maka nkwonkwo ahụ emetụtara, nke n'aka nke ya nwere ike ibute mgbu na ọrụ ka daa ogbenye. Ma ọ bụghị ya, a na-adụ ndị na-arịa ogbu na nkwonkwo ọdụ ka ha kwụsị ị smokingụ sịga na ngwaahịa ndị a na-a tobaccoụ sịga, ebe ọ bụ na nke a jikọtara ya na mgbasa ọbara na-eme ka ike na-adịwanye mma.
Ntinye aka na nkwonkwo na Chiropractic na ogbu na nkwonkwo
Nchikota nkwonkwo haziri nke oma egosiputara nke a njikọta chiropractor mere (ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka na-agwọ ọrịa) nwere mmetụta na-adakarịpụta ọgwụgwọ:
“Mpempe nyocha meta (French et al, 2011) gosipụtara na ọgwụgwọ akwụkwọ ntuziaka nke ọrịa osteoarthritis nwere mmetụta dị mma na usoro mgbu na nkwalite arụ ọrụ. Ọmụmụ ihe ahụ kwubiri na ọgwụgwọ akwụkwọ ntuziaka dị irè karịa mmega ahụ na ọgwụgwọ nke ọrịa ogbu na nkwonkwo. "
Ndụmọdụ maka nri ndị ọrịa ogbu na nkwonkwo
Nyere na mbufụt (mbufụt) na-etinyekarị aka na nyocha a, ọ dị mkpa itinye uche nri gị nri mgbochi mkpali na nri - ma ọbụghị ma zere ịnwe ọnwụnwa pro-inflammatory (ọdịnaya shuga dị ala yana uru ihe oriri dị ala).
Sulfate glucosamine ya na chondroitin sulfate (Gụọ: 'Glucosamine sulfate na-eyi?') egosipụtakwala mmetụta megide ọrịa ogbu na nkwonkwo na-adịchaghị ala nke ikpere na nnukwu ọmụmụ ihe (Clegg et al, 2006). N'ime ndepụta dị n'okpuru, anyị ekewaala nri ị kwesịrị iri na nri ị kwesịrị izere ma ọ bụrụ na ị nwere ogbu na nkwonkwo / ogbu na nkwonkwo.
Nri ndị na-alụ ọgụ ọgụ (nri ị ga-eri):
Tomato na mkpụrụ osisi (wdg., Oroma, bluuberi, apụl, strawberries, cherị na goji tomato)
Azụ gbara agba (dịka salmon, mackerel, tuna na sardines)
Inine akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (wdg.
Kọfị (nsonso ya na-egbochi ọria nwere ike inyere ọlụ ọgụ)
Mkpụrụ (eg almọnd na walnuts)
Iji mezue ntakịrị ihe banyere nri mmadụ kwesịrị iri, mmadụ nwere ike ikwu na nri ahụ kwesịrị ịbụ nke a ga-eji eme ya ka ọ bụrụ nke a na-akpọ nri Mediterenian, nke nwere nnukwu mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, mkpụrụ, ọka niile, azụ na mmanụ dị mma.
N’ezie, ụdị nri a ga-enwe ọtụtụ ihe ọma ndị ọzọ bara uru - dịka ịchịkwa ibu karịa na ahụike gị kwa ụbọchị, nwee ike.
Nri ndị na-abawanye mmeghachi omume mkpali (nri iji zere):
Mmanya na-egbu egbu (dịka mmanya, mmanya na-acha ọbara ọbara, mmanya ọcha na mmụọ)
Anụ edozila (eg. Anụ ezi anaghị ere anụ ahụ nke naeme ọtụtụ usoro nchekwa)
Nri eghe esi nri (eghe n’ofe na ihe ndi ozo)
Gluten (ọtụtụ mmadụ na-arịa ogbu na nkwonkwo na-emeghachi omume na-adịghị mma)
Ngwa ahịa mmiri ara ehi / lactose (Ọtụtụ ndị kwenyere na e kwesịrị izere mmiri ara ehi ma ọ bụrụ na ọrịa ogbu na nkwonkwo metụtara gị)
Kapịrọs a nụchara anụcha (dịka achịcha dị nro, achịcha na achịcha)
Nri shuga (ihe di n’ime ya
Otu nri nri ndị a kpọtụrụ aha n'elu bụ ụfọdụ n'ime ndị ekwesịrị izere - dịka ndị a nwere ike ime ka ọrịa ogbu na nkwonkwo na ọrịa ogbu na nkwonkwo bekee.
Ọgwụ oyi na ọrịa ogbu na nkwonkwo (ogbu na nkwonkwo)
Na usoro izugbe, a na-atụ aro ka ọ na-emeso oyi na mgbaàmà nke ogbu na nkwonkwo. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ na-ajụ oyi na-ebelata usoro mkpali na mpaghara. Agbanyeghị, ọ bara uru ịkọwa na ọ bụghị onye ọ bụla na-eme nke ọma na nke a.
Agehịa aka na ogbu na nkwonkwo
Hịa aka n'ahụ na ọrụ ahụ ike nwere ike ịnwe ihe mgbaàmà na-ebelata ahụ ike na akwara siri ike.
Ọgwụ na ọgwụ ogbu na nkwonkwo / ọrịa ogbu na nkwonkwo
E nwere ọtụtụ ọgwụ na ọgwụ ndị e mere iji gwọọ ọrịa ogbu na nkwonkwo na ọrịa ogbu na nkwonkwo. Usoro a na-ahụkarị bụ ịmalite site na ọgwụ ndị nwere obere nsonaazụ na-adịghị mma ma nwaa ọgwụ siri ike ma ọ bụrụ na ndị nke mbụ anaghị arụ ọrụ nke ọma.
Medicationdị ọgwụ eji eme ya dịgasị iche na-adabere n’ụdị ọrịa ogbu na nkwonkwo / ọrịa ogbu na nkwonkwo onye ahụ nwere. Ndị na-ahụkarị ọgwụ na ọgwụ na-abata n’ụgwọ pill na dịka mbadamba - ụfọdụ n’ime ndị a na-ejikarị bụ paracet (paracetamol), ibux (ibuprofen) na opiates.
Na ọgwụgwọ nke ọrịa ogbu na nkwonkwo, a na-ejikwa ọgwụ a na-akpọ anti-rheumatic akpọ Methotrexate - nke a na - arụ ọrụ naanị megide sistemụ ịlụso ọrịa ọgụ ma na - eduga n'ọganihu nke ọnọdụ a.
Ọrịa ogbu na nkwonkwo / ọrịa ogbu na nkwonkwo
N’ụfọdụ ọrịa ogbu na nkwonkwo, ya bụ, ọrịa ogbu na nkwonkwo nke na-etisa ma mebie nkwonkwo (dịka ọrịa ogbu na nkwonkwo), ọ nwere ike ịdị mkpa iji dochie nkwonkwo ma ọ bụrụ na ha mebie nke na ha anaghịzi arụ ọrụ.
N'ezie, nke a bụ ihe ịchọghị ma bụrụkwa ebe ikpeazụ ị ga - esi n'ihi ihe ọghọm nke ịwa ahụ na usoro ịwa ahụ, mana nke nwere ike ịdị oke mkpa n'ọnọdụ ụfọdụ.
Dịka ọmụmaatụ, ịwa ahụ hip na ikpere bụ ihe a na-ahụkarị n'ihi ọrịa ogbu na nkwonkwo, mana ọ dị mwute ikwu na nkwa agaghị adị. Ọmụmụ ihe ọmụmụ n’oge na-adịbeghị anya gosipụtara obi abụọ ma ịwa ahụ dị mma karịa mmega ahụ - yana ụfọdụ ọmụmụ egosipụtakwala na ọzụzụ a haziri ahazi nwere ike ịka mma karịa ịwa ahụ.
N'ọtụtụ oge, a ga-anwale cortisone tupu ịga arụ ọrụ dị egwu.
Ọrịa na-arịa ọrịa ogbu na nkwonkwo
N’oge na-eto nke ọrịa ogbu na nkwonkwo na ọrịa ogbu na nkwonkwo, oge ezumike na izu ike nwere ike ịdị mkpa - ọ na-abụkarị ya na usoro ọgwụgwọ. Ọrịa na-arịa ọrịa ga-adịgasị iche ma ọ gaghị ekwe omume ikwu ihe ọ bụla akọwapụtara ogologo oge a ga-akọ ọrịa ogbu na nkwonkwo.
Ọ bụ NAV bụ ngalaba na-ahazi ya na ezumike ọrịa. Ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ akawanye njọ, nke a nwere ike ime ka onye ahụ ghara inwe ike ịrụ ọrụ, nwee nkwarụ, ma dabere na ụgwọ nkwarụ / paradaịs nkwarụ.
Okpomoku oku na ogbu na nkwonkwo
Na usoro izugbe, a na-atụ aro ka ọ na-emeso oyi na mgbaàmà nke ogbu na nkwonkwo. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ na-eme ka nkụda mmụọ kwụsịlata usoro mbufụt na mpaghara - ikpo ọkụ nwere ike ịrụ ọrụ na nke ọzọ ma mee ka usoro mbufụt ahụ na nkwonkwo ahụ emetụtara.
Nke a na-ekwu, a na-atụkarị aro iji ikpo ọkụ na anụ ahụ dị nso maka mgbapụta mgbapụta nke akwara mgbu. N'ezie, nke a apụtaghị na ọrịa ogbu na nkwonkwo na ndịda anaghị aga aka na aka - mana nsonaazụ nke ọkụ ọkụ na-ebute ọrịa ogbu na nkwonkwo na ọrịa ogbu na nkwonkwo nwere ike ịrụ ọrụ n'ọtụtụ ọkwa nke na-enyere aka ịba ụba nke anụ ahụ na nke uche.
Mgbatị na ọzụzụ maka ndị nwere ọrịa Rheumatism
Ọzụzụ dabara na ọdọ mmiri mmiri ọkụ, yana mmega ìgwè ma ọ bụ ibu obere mmetụta nwere ike ịba uru dị ukwuu maka ndị nwere ọrịa rheumatism - ma na-atụ aro ya nke ukwuu. Njem njem na ala siri ike bụkwa ụzọ dị mma iji nọrọ n'ụdị. Anyị na-atụ aro ịme mgbatị na mmegharị kwa ụbọchị - dị ka egosiri na vidiyo dị n'okpuru.
VIDIO: Ihe ngosi 17 megide Polymyalgia Rheumatism
Polymyalgia rheumatism bụ ọrịa rheumatic nke a na-ahụ maka mmeghachi omume mkpali, na mgbu olu, ubu na hips. Na vidiyo dị n'okpuru ebe a, chiropractor na onye na-agwọ ọrịa Alexander Andorff gosipụtara mmemme ọzụzụ 3 dị iche iche - otu maka mpaghara ọ bụla kachasị - yana ngụkọta nke mmega 17.
VIDIO: Mgbatị usoro 5 maka ndị nwere Fibromyalgia
Knowingmara mmeghari mmegharị emegharị nke ndị nwere ọrịa fibromyalgia dị ezigbo mkpa. Vidio dị n’okpuru na-egosi mmega ahụ dị nro ise nwere ike inyere gị aka ijigharị motsi, ikesa ma belata mgbu.
Sonye na ezinulo anyị ma tinye aka na ọwa YouTube anyị (pịa ebe a) maka ndụmọdụ mmega ahụ n'efu, mmemme mmega ahụ na ịmara ahụike. Mmadụ Bịa!
Ọzọkwa gụ: 7 Ihe omume maka Rheumatics
You nwere ajụjụ gbasara edemede ahụ ka ọ bụ na ịchọrọ ndụmọdụ ọ bụla ọzọ? Jụọ anyị ozugbo site na nke anyị facebook page ma ọ bụ site na igbe nke dị n'okpuru.
Kwekọrịta Obi iru ala ka ị nwekwuo ihe ọmụma banyere Rheumatism
Ihe omuma n’etiti ndi Ohaneze na ndi okacha amara bu otu uzo iji bulite elekwasie anya n’onu mmepe nke ntule ohuru na usoro ọgwụgwọ maka oria mgbu. Anyị na-atụ anya ị wepụta oge ịkekọrịta nke a na mgbasa ozi mmekọrịta ma kwuo tupu oge enyemaka gị. Ikere òkè gị pụtara ihe dị ukwuu nye ndị o metụtara.
Nwere onwe gị ịpị bọtịnụ dị n'elu iji kekọrịta post ahụ n'ihu. Ekele diri ndi nile soro ha.
Peeji ọzọ: - IHE I Kwesịrị Knowmara Banyere Fibromyalgia
Akwadoro Onwe-Onwe Gị maka Rheumatism
Jiri nke mkpakọ Noise (Njikọ ahụ ga-emepe na windo ọhụrụ).
Jiri nke Arnica ude (nke a) ma ọ bụ Igwe eji ekpo oku megide akpịrị nkwonkwo na akwara.
Biko kwado ọrụ anyị site na isoro anyị na ịkekọrịta isiokwu anyị na mgbasa ozi mmekọrịta:
Linn ekwu, sị:
28/11/2016 at 09:18
Ọ bụ na ogbu na nkwonkwo nwere ike ibute ọrịa ogbu na nkwonkwo? M weere MRI nke pelvis n'oge opupu ihe ubi a ma n'ebe ahụ ha chọtara nchoputa dakọtara na ọrịa ogbu na nkwonkwo na nkwonkwo IS (yana prolapse na azụ). Ọmụmụ ihe onyonyo ọhụrụ n'oge na-adịbeghị anya, CT, gosipụtara osteoarthritis. Gịnị kpatara na egosighị ha abụọ? Ọ bụ eziokwu na MRI nwere ike igosi mgbanwe ndị gara aga? Ana m agbasi mgba ike ruo ogologo oge na isi ike na mgbu na azụ na pelvis (gbadata n'ebe azụ), ikpere, hips, nkwonkwo ụkwụ, olu na ubu. Ma ọ bụghị ya, m nwekwara mbufụt na hip, hypermobile nkwonkwo na nkwonkwo ụkwụ na ịghaghachi azụ. Adị m ná mmalite afọ iri atọ ma chee na ọ bụ ndị meworo agadi bu ọrịa ogbu na nkwonkwo.
Thomas v / Vondt.net ekwu, sị:
28/11/2016 at 14:18
Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị maka ndị nọ n'afọ 30 ka ha nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo / ogbu na nkwonkwo. Karịsịa na-echeghị na ị nwere mwepu na azụ azụ nke na-egosi na enweela ụfọdụ mkpakọ dị n'ahụ gị kemgbe ọtụtụ afọ - na nke a ji nwayọọ nwayọọ na-ebute nkwụsịtụ diski.
Ọrịa ogbu na nkwonkwo pụtara nanị mbufụt nke nkwonkwo ma na-emekarị na nkwonkwo nke ọrịa ogbu na nkwonkwo na-emetụtakwa. O yikarịrị ka ọ ga-abụ na ị na-enwe obere ujo absorption n'ihi dysfunctional intervertebral disc nke pụtara na enwere nrụgide na nkwonkwo na nkwonkwo akụkụ na mpaghara - nke n'aka nke ya nwere ike ibute mmụba nke iyi.
28/11/2016 at 23:05
Daalụ nke ukwuu maka azịza ọsọ ọsọ.
Ekwuru na enwere m ọrịa ogbu na nkwonkwo / spondylitis. Nke a bụ tupu m were CT. Ọ bụ ihe a na-eche na nchoputa ahụ bụ n'ihi nkwụsịtụ ahụ na ọ bụghị dịka ọmụmaatụ. Nchegharị nke ekwuru? Ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ n'ihi ma prolapse na ọrịa rheumatic? Enwere m rashes na Anti-CCP, mana ọ bụghị HLA-B27. Kedu ọrụ dị mma ime? igwu mmiri?
O kwere omume kpamkpam.
Ihe omume a na-atụkarị aro bụ igwe elliptical na igwu mmiri - yana ọzụzụ mmiri ọkụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta ya. Ọ ga-ekwe omume na enwere onyinye nso gị - dabara na ndị nwere ọrịa rheumatic - ma ọ bụrụ na ị gakwuru ndị obodo.
Harrieth Nordgård (NORDKJOSBOTN) ekwu, sị:
15/03/2017 at 17:10
O kwesịrị ịbụ iwu na mgbe ị nwetara ọrịa dị otú ahụ, na anyị nwetara akwụkwọ ndenye ọgwụ dị ka nke a n'aka dọkịta. Echere m na nke a dị mma!
HC ekwu, sị:
Nwere azụ dị ala, mgbu hip na ubu.
Mgbe ụfọdụ, m na-enwekwa ihe mgbu na nkwonkwo mkpịsị aka na nkwonkwo ụkwụ m. Adị m afọ iri atọ na isii. Nke a na-enye m nsogbu kemgbe ọtụtụ afọ ma ugbu a, ihe mgbu ahụ dị oke njọ nke na m ga-ajụ dọkịta ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịzigharị m ọzọ iji chọpụta ihe na-ezighị ezi.
A gwara ya na ọ nweghị ọtụtụ ihe ọ nwere ike ịbụ. Site na ozi ịgakwuru onye na-ahụ maka ahụike na-ewere brexidol. Dị nnọọ nọrọ 2 izu na voltaren na-echeghị na ọ nyeere ukwuu. Dọkịta ahụ weere ọbara ọnwa isii gara aga.
Enwetara m nsonaazụ dị mma na ihe na-aga na nkwonkwo. Na mgbakwunye, ana m aṅụ ọgwụ mgbali elu. M̀ kwesịrị ijide n'aka na dọkịta ahụ chere na ọ dịghị ihe dị m njọ? Nwee ihe mgbu ruo n'ókè nke na ọ gaghị ekwe m omume ịrụ ọrụ na ịnya ụgbọ ala. Ihe mgbu na-akawanye njọ site n'ịnọ ọdụ na dinara ala. Ọ na-akawanye mma mgbe m kwagara mana ha na-alọghachi ngwa ngwa. Ọ nọ na ezumike ọrịa ọtụtụ oge n'afọ n'ihi nke a. Ekwesịrị m ịgakwuru onye na-ahụ maka ọrịa reumatologist nkeonwe? Chee na nke a dị oke ọnụ. Enwere m olileanya na ị ga-eme ka m mara ihe.
12/06/2017 at 20:57
Nke a na-ada ma na-akụda mmụọ ma na-akụda mmụọ. Ịtụgharị ya dị ka ịgba bọọlụ n'ụzọ ahụ nwere ike imetụta psyche na ahụike zuru oke.
1) Kedu maka ọzụzụ na mmega ahụ? Ị na-emega ahụ mgbe niile? Kedu ụdị mmega ahụ na-arụ ọrụ maka gị?
2) Ị na-ede na nyocha ọbara dị mma na ihe metụtara nkwonkwo? N'ebe a, ị nwere ike ịrịọ ya ka ọ nweta akwụkwọ nyocha ọbara - ọ bụrụ na nsonaazụ dị mma, e nwere ihe siri ike na-egosi na ị nwere ike ịga na nyocha rheumatological.
3) Ị ga-atụle ịga na kọntaktị ọzọ bụ isi (chiropractor ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa ntuziaka) nke nwekwara ikike ka a kpọtụrụ ya maka nyocha nke rheumatological. Otu ọrụ abụọ a nwekwara ikike ịtu aka na onyonyo.
4) Enwerela foto gara aga? Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị ka ha kwubiri?
Biko gụọ azịza gị dị ka egosiri n'elu - nke a maka mkparịta ụka doro anya.
Daalụ maka nzaghachi ngwa ngwa:)
Ee, ọ bụ ihe na-akụda mmụọ na ọ dị egwu inwe nnukwu ihe mgbu na mmetụta nke ekwenyeghị ma ọ bụ were ya kpọrọ ihe.
1. Anaghị m ọzụzụ dị ukwuu dị ka m nwere a pụtara anụ ahụ ọrụ na 0 uru. Anwala ịzụ ọzụzụ maka oge, mana agbaala onwe m ọkụ na nke a. Na-eche na ike na-agwụ m na ike ọgwụgwụ karịa ka ọ na-adị. Na-ewere mgbakwunye na ọ nweghị ihe ọ bụla na-enweghị ihe ọ bụla dịka nyocha ọbara si dị. Enwetala mmega ahụ dị mfe iji mee ka ubu dịkwuo mma.
N'ihe banyere nyocha ọbara, a gwara m na enwere ike ịkpọga m ọkachamara, ma ọ dị ụkọ na ha chọtara ihe na nke a na-adịghị mkpa dị ka dọkịta si kwuo.
3. M ga-agụ ntakịrị banyere onye na-agwọ ọrịa ntuziaka ma ọ bụrụ na nke a nwere ike ịbụ ihe.
4. Edebeghị foto dịka dọkịta na-eche na nke a bụ ihe a na-eleghara anya ma na-ahụta dị ka ihe na-adịghị mkpa.
Dị ka ị ghọtara, ọ dị m ka m na-akụ isi m na mgbidi. N'ịtụle ịgbanwe GP. Ọ bụ n'ezie ikpe na enweghị isi na Mr ma ọ bụ ct?
13/06/2017 at 06:22
Nnwale ọbara. Ọ bụ ihe kpatara rheumatoid.
13/06/2017 at 08:14
Nke a bụ ihe ngosi doro anya nke nyocha ọzọ nke onye na-ahụ maka ọrịa rheumatologist. A na-agbachitere ntugharị aka n'onwe ya maka nyocha ọha site na nchọpụta dị mma a na nyocha ọbara gị.
Zuo ike ekwu, sị:
01/11/2017 at 17:47
Ndewo, ị nwere ike ịkwado ụfọdụ ndị dọkịta na ụlọ ọgwụ ọ bụla nke onwe ndị mara mma n'inyocha rheumatism yana ọkachamma ndụmọdụ maka nyocha fatique?
Ọ bụ onye nwere ọtụtụ ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na ihe emee, mgbe ahụ, ọ na-eme m… ihe mberede nnụnụ. Ugbu a, e nweela ọtụtụ ime ọpụpụ, ịwa ahụ bile, mbufụt nke obi, wdg. Mgbe ahụ na-eche na dọkịta n'oge na-adịghị eche na e nwere ihe ọzọ.
Ma gịnị nwere ike ịbụ;
Enwere m ike ọgwụgwụ mgbe niile, anaghịkwa m ezu ike ọbụlagodi mgbe ụra ihi ụra 8-10. Ga-edina ala hie ụra n'ehihie. Ọ dị afọ 36. Enweela ụlọ ahịa ígwè na-arị elu na ala, mana nyocha ọbara ikpeazụ gosiri ígwè nkịtị, mana vitamin D dị ntakịrị.
Enwere m ịwa ahụ na meniscus na cruciate ligament ọtụtụ afọ gara aga. Ma mgba na mgbu na ikpere abụọ, nkwonkwo mkpịsị aka na hip. Karịsịa na mgbanwe ihu igwe.
Ọtụtụ mgbe, oyi na-atụ m, oyi na-atụ m n'ụkwụ m, mkpịsị aka m na ukwu.
Ike gwụrụ na enweghị uche na enweghị ike ịkwado ya. Mmadụ kwuo ihe, a na-echefu ya ma ọ bụrụ na e deghị ya ede.
Ihe mgbu na aka na ikpere na-adị ka mgbu mgbu. Enwere m ihe mgbu ma m hulata, rịgoro steepụ, nọdụ ala ma ọ bụ dinara ala. Na-esi ike kpamkpam ma na-eme ọsọ ọsọ ma ọ bụrụ na m bilie.
M na-efega n'ụlọ ịsa ahụ mgbe mgbe, ọ na-adịkwa m ka m na-afụ ọnụ karịa ka m na-aṅụ.
Olileanya na ị nwere ike inye aka.
amaghị aha ekwu, sị:
Enwere ike ịkwado ụlọ ọgwụ Rheumatism Lillehammer. Ha bụ nnọọ phenomenal.
Mette N ekwu, sị:
Nnọọ. Ana m eche maka otu ihe. M nwere rheumatism na ụfọdụ mmegharị m "obere sekit". Mmetụta jọgburu onwe ya, mana ọ na-adịru naanị obere oge ma alọghachila m. Nwa m nwoke enwere mgbawa n'olu isi.
elin ekwu, sị:
12/03/2018 at 07:29
Ihe ọmụma na mma. Ozi kacha mma ewepụtara ruo ugbu a.
Merete Repvik Olsbø ekwu, sị:
12/03/2018 at 09:05
Nnọọ. Kedu ihe kpatara spondylitis ankylosing ji agafe?
Nke a dị ezigbo mma ịgụ!
Ọtụtụ ozi bara uru gbakọtara.
Anne ekwu, sị:
13/03/2018 at 07:45
Nnọọ. M na-agbasi mbọ ike na mkpịsị aka abụọ na aka aka na-afụ ụfụ na-egbu mgbu. Mgbe ụfọdụ, ana m enwe mmetụta na ogwe aka m - dị ka a ga - asị na ha kpọnwụrụ akpọnwụ kpamkpam. Yabụ na mmadụ ga-ajụrịrị onwe ya wee chekwa ihe mmadụ ga-eme nke a? Daalụ n'ọdịnihu.
16/12/2019 at 02:18
Ndewo! scoliosis nwere ike ime ka rheumatic mbufụt nke ice nkwonkwo (sacroilitis)?
02/01/2020 at 18:49
Scoliosis enweghị ike ịkpata mbufụt nke nkwonkwo iliosacral, mana n'ihi ntụgharị na-enweghị isi, mmadụ nwere ike ịhụ na nkwonkwo pelvic karịrị akarị n'akụkụ nke ọzọ - nke n'aka nke ya nwere ike ibute hypomobility na belata ọrụ.
Mana m ghọtara nke ọma ma ọ bụrụ na aghọtara m na ị nwere rheumatism? N'okwu a, nke a nwere ike ịkpata mgbakasị ahụ na mbufụt nke nkwonkwo pelvic (sacroilitis).
Nicolay v / Ahụghị Ya
16/01/2020 at 21:15
Achọpụtala m na m46.1 spondylarthritis. Enweela ọgwụgwọ na-aga n'ihu site na iji ọgwụ abụọ dị iche iche dị ndụ na-enweghị mmetụta na-eju afọ. MRI na njedebe nke Septemba ka na-egosi mgbanwe ọrịa ogbu na nkwonkwo, ọkpụkpụ ọkpụkpụ edema elu na etiti aka ekpe IS nkwonkwo n'agbanyeghị ọgwụgwọ ndu maka otu afọ. Achọpụtara scoliosis na X-ray na 2018. Right-convex thoracic na ekpe-convex lumbar s-shaped, tupu mmalite nke ọgwụgwọ ọgwụ nje, ma ọ dịghị onye kwuru ya tupu njikwa ikpeazụ na October afọ gara aga. N'ihi na ọgwụgwọ ọrịa ahụ nwere mmetụta dị nta, ha kwenyere na scoliosis na-emepụta mbufụt n'ibu na nkwonkwo IS. Ịga maka nyocha ọzọ na orthopedic, mana echere dị ogologo oge. Maka m, ọ na-ada ụda nke ukwuu na scoliosis nwere ike ịbụ ihe kpatara ọ bụghị ọrịa ogbu na nkwonkwo nke a chọpụtara na m bụ nke MRI kwadoro. Etere nke a, ndo mana enwere olile anya na mmadụ nwere ike idi ya ịgụ na zaa. Enwere m obi nkoropụ n'ihi na ejirila ọgwụ nje na-agwọ m ruo mgbe a ga-enyocha ya ọzọ, mgbe a ga-ekpebi ihe a ga-eme ọzọ. Anatala m Vimovo, mana ọ na-akpatara m ọtụtụ nsogbu afọ .. M na-atụ egwu na a ga-enyocha nchoputa ahụ na na m ga-alaghachi na mmalite ọzọ.